Imininingwane Yesigungu Esigcwele: Ama-Funnel Metrics ne-Attribution ye-Salesforce | Martech Zone
Ezinkampanini eziningi, ukumaketha nokuthengisa akusebenzi ezingeni lokudlala elilinganayo. Imisebenzi yokuthengisa ye-B2B inezinhlelo zeCRM ezinjengeSalesforce ukukala ukusebenza, kufaka phakathi amamethrikhi wenkampani jikelele nemininingwane eyimbudumbudu yethimba nokusebenza komuntu ngamunye. Njengoba uhlelo lweCRM lusebenza njengohlelo lwamarekhodi wemali engenayo ezinkampanini eziningi, iqembu lokuthengisa linedatha ethembekile ku-C-suite.
Amaqembu wokumaketha asebenzisa izixazululo ezahlukahlukene ze-martech ukwenza imikhankaso isebenze futhi ilinganise ukuthi kwenzekani phezulu komugqa wokuthengisa. Kepha iningi alikwazi ukubhoboza phansi ukuze libone ukuthi kwenzekani lapho ukuhola sekuhanjisiwe ekuthengisweni. Okugcwele Circle Insights, isisombululo sesisombululo sokuphathwa kokusebenza esakhiwe ngo-100% kufayela le- I-Salesforce Service Cloud®, Iletha idatha yokuthengisa nokumaketha ndawonye, ​​idala umthombo owodwa weqiniso ledatha.
Imikhiqizo ye-Full Circle Insights iletha imininingwane ecacile emnikelweni wokumaketha kumali engenayo futhi yenze ukusebenza kwethimba lokuthengisa kubonakale ngemininingwane ephelele yokumaketha neyokuthengisa. Ukucaca okuvelayo kuvumela abaholi bezentengiso nabathengisayo ukuthi benze izinqumo ezingcono ezandisa ukusebenza komkhankaso, ezisheshisa amapayipi kanye nemali engenayo, kanye nokushayela ama-ROI aphezulu wokukhangisa.
Umbuthano Ogcwele Isixazululo Sokuphendula Impendulo inika abasebenzisi idatha ephelele yokuthengisa - kufaka phakathi ukunikezwa komkhankaso we-Salesforce - badinga ukushayela imali. Esikhundleni samaspredishithi anzima nemibiko enganembile, engaphelele, Ukuphathwa Kwezimpendulo kunikeza imininingwane ecacile, enembile ekhombisa imiphumela yokusebenza kokumaketha, ukushayela ukukhula okungenakulinganiswa, ukufeza iSalesforce ROI, ukuvumelanisa ukumaketha nokuthengisa, futhi unike amandla ukuhlela okuzethembayo.
Ukuphathwa Kwezimpendulo kunikeza indlela yokulandela izimpendulo zomholi kuzo zonke izigaba ze-funnel futhi kunikeze umbono ovaliwe wemiphumela, kusuka kumthombo kuya kumphumela. Ibuye inikeze ngamamethrikhi wokuguqula aphelele avumela amaqembu wokumaketha nokuthengisa ukuthi abone ukuwohloka kwenqubo, njengamaphoyinti okusuka lapho imikhondo iwela khona imifantu, ukuze bakwazi ukusebenzisana ngokubambisana ukukhulisa amathuba.
Amamethrikhi wokusebenza komkhankaso akhomba ngokunembile ukuthi imiphi imikhankaso ethonya ipayipi kanye nemali engenayo, enika amandla ukusebenza kahle kwenhlanganisela yokumaketha. Amamethrikhi wokumaketha we-akhawunti asuselwa ku-akhawunti namakhono esichasiso avumela abasebenzisi ukuthola ukubonakala ekufuneni kwe-akhawunti ngenkathi kulinganiswa ukusebenza kuwo wonke ama-akhawunti nezingxenye.
Umbuthano Ogcwele Umenzi womdlalo umkhiqizo uvumela abasebenzisi ukuthi baxhume amachashazi phakathi kokuhola nama-akhawunti ukuze bakwazi ukuzibandakanya nokukala izinhlelo ze-ABM ngempumelelo. Nge-Matchmaker, abasebenzisi bangabandakanyeka ngokuqinile kuma-akhawunti akhonjiwe ngenkathi bephethe ngokuqondisisa imikhondo engenayo, ukuxhuma ukuhola ngakunye kuma-akhawunti afanele njengengxenye yecebo lokuthengisa elisuselwa ku-akhawunti namasu wokumaketha.
Ukuxhuma amachashazi ngokubandakanyeka kwe-akhawunti ngokwendabuko ngaphakathi kwe-Salesforce, i-Matchmaker isebenzisa i- "fuzzy matching" kanye nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi sokudonsa nokwenza lula ukwenza imithetho ehambisanayo yokwenza ngokwezifiso, okwenza kube lula ukwenza okungabonakali kubonakale. Iphinde inikeze umkhondo kubanikazi ngemithetho enziwe ngezifiso ngakho-ke lonke ithuba lihanjiswa ngendlela efanele futhi lilandelwe, kuguqulwe izimpendulo zomholi zibe yingxenye yezinjongo eziqondisiwe.
Umlingisi wenza futhi kube lula ukukhomba ngamasu nokuqondisa ama-akhawunti angenisa imali engenayo eningi, okunikeza ukubonakala okugcwele emisebenzini yomlando nakwimethrikhi yokusebenza ye-akhawunti ngayinye. Amakhono ayo wokuzilungiselela avumelana nezimo enza ukufaniswa okuzenzakalelayo, ukuguqulwa kanye nemithetho yokwabiwa kube lula ngokuvumela abasebenzisi ukuthi bakhethe lapho ukuhola kufanele kuguqulwe ngokuzenzakalela koxhumana nabo noma kusethe izingqinamba zokwabiwa komnikazi we-akhawunti efanele ukuthi ahlanganyele imikhondo.
Umbuthano Ogcwele Ukunikezwa Komkhankaso umkhiqizo uvumela abasebenzisi ukulandelela ukusebenza komkhankaso ku-Salesforce ukuthola umbono ophelele wokuthi izinhlelo zokumaketha zikhiqiza kanjani imali. Ngokunikezwa Komkhankaso, abaholi bezokumaketha bathola ukuqonda okunembile kokusebenza komkhankaso ukuqhuba izinqumo zokuxuba ezisebenza kahle, kufaka phakathi ukubonakala emkhankasweni ngamunye onomthelela kuwo wonke amathuba.
Kutholakala njengengxenye ye-Full Circle Response Management noma njengomkhiqizo ozimele, i-Campaign Attribution iguqula indlela abathengisi abalandelela ngayo futhi balinganise ukusebenza komkhankaso ku-Salesforce ngamamodeli wokunikeza ngezifiso kanye namathuluzi wokumodela angaphandle kwebhokisi. Inikeza isithombe esiphelele sendlela izinhlelo zokukhangisa ezigcwele ezisebenza ngayo. Kubandakanya nokubika kokuhlaziywa kwemali engenayo kanye namapayipi angahlukaniswa ngohlobo lomkhankaso, usayizi wamakhasimende nomthombo wokuhola kanye nokubukwa kwamathrendi.
I-Campaign Attribution ivumela abasebenzisi ekunikezeni isisindo ngamamodeli wokuthinta okukodwa noma wokuthinta okuningi noma ukudala imodeli ehambelana nomjikelezo wabo wokuthengisa kanye nezinhloso zokumaketha, kufaka phakathi amandla okwenza ngezifiso ukukala, ukufaka okuguquguqukayo ngokwezifiso nemiphumela yemodeli yokuqhathanisa. I-Campaign Attribution igcina idatha enikeziwe ngqo ngaphakathi kwe-Salesforce, ivumela abasebenzisi ukuthi bangene emininingwaneni eyimbudumbudu kuwo wonke ubukhulu bese bekhiqiza amamethrikhi wokusebenza anamandla, athembekile.
I-Digital Source Tracker
Abathengisi abaqhutshwa ngokusebenza badinga ukukala ukusebenza kahle kokukhangisa kwedijithali ukuze bahlole ukuthi ungawasebenzisa kanjani futhi kuphi kahle amadola wokumaketha. Namuhla, ukuchofozwa okuvela ekukhangisweni kwedijithali, eziteshini zenhlalo, nakweminye imithombo eku-inthanethi kusengaxhunywanga emikhondweni engaphakathi kweCRM. Abakhangisi badinga ukubhangqa ukuthinta kwedijithali okungaziwa okungaziwa kulokho okukhonjisiwe, okuphendulayo ngaphakathi kwesistimu yokubika kwemali engenayo yenhlangano.
Umbuthano Ogcwele I-Digital Source Tracker ingeza lokhu kusebenza ngaphezulu komkhiqizo wethu we-funnel metrics, Ukuphendula Kwezimpendulo. Ngokubambisana, le mikhiqizo ithwebula ukubandakanyeka okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, kufaka phakathi ukuthinta okungaziwa, kusuka kuziteshi eziningi, izinhlelo nezinhlelo zomthengisi, ukukala ukusebenza kwecebo labo lokukhangisa eliphelele kanye nokunikela kwipayipi kanye nemali engenayo.
Mayelana nokuqonda kombuthano ophelele
I-Full Circle Insights iletha izixazululo zokulinganisa ezentengiso nezentengiso zokukhulisa inhlanganisela yezokumaketha yenkampani nokushayela imali ethe xaxa. Le nkampani inikeza ukunikezwa kokuthinta okuningi, amamethrikhi ophelele we-funnel kanye nobuchwepheshe bokulawulwa kokuhola. Kwakhiwe i-100% ku-Salesforce Service Cloud®, imikhiqizo ye-Full Circle Insights 'ihambisana nezixazululo ezihamba phambili zokumaketha.
I-Full Circle Insights yipulatifomu oyidingayo ukukala umthelela wokumaketha futhi ukhulise ibhizinisi lakho. Sichithe iminyaka eyisishiyagalolunye sakha ipulatifomu ebanzi elandela futhi ilinganise yonke imikhankaso, izinhlelo, imicimbi neziteshi endaweni eyodwa. Ipulatifomu yethu igcwalisa isitaki sakho samanje sokumaketha futhi iletha idatha evela kuzo zonke izinhlelo zakho zokumaketha ezahlukahlukene ibe yiCRM ngendlela ejwayelekile yokuhlaziywa ngokuphelele kofanele. Futhi okubaluleke kakhulu, ipulatifomu yethu ikunikeza ukuqonda okusebenzayo kanye namathuluzi wokuthuthukisa imikhankaso nezinhlelo zokwenza umthelela omkhulu kakhulu ebhizinisini lakho.
Hlela Idemo Yemininingwane Yombuthano Ogcwele
Tags: abmukuphathwa okusekelwe ku-akhawuntiI-Digital Source Trackerimininingwane yombuthano ogcweleukufana okungaqondakali
Ukwakha Uhlu Lokuposa Lokumaketha Nge-imeyili